दसैँमा विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ? यी सामान ल्याउँदा लाग्दैन भन्सार – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दसैँमा विदेशबाट घर आउँदै हुनुहुन्छ? यी सामान ल्याउँदा लाग्दैन भन्सार
काठमाडौं– दसैँमा विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ भने ल्याउने विदेशबाट ल्याउँदा कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्दैन। केही सामानको भन्सार शुल्कमा सीमितता तोकिएको छ। सीमितता तोकिएका सामान बढी ल्याएमा जफत हुने तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।
निम्न सामग्री ल्याउँदा भन्सार शुल्क पूर्ण छुट हुनेछ लुगाफाटा, बिच्छ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना सामान
औषधि उपचार गराई फर्किएका बिरामीले ल्याएका औषधि शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिले सहाराका रुपमा प्रयोग गरेका सामान
पूर्वयुवराज पारस चढेको गाडी ले ठ,क्कर दिदा बाछाको मृ,त्यु , चा,लक प्र हरी नि यन्त्र,णमा
भारतसँग वि वाद गरि रहनुभन्दा सिमानामा प र्खाल लगाउ